‘Abazali abachazele izingane ngocansi’ | IOL Isolezwe
‘Abazali abachazele izingane ngocansi’
Isolezwe / 29 November 2012, 1:03pm / LUNGI LANGA
IZINGANE zifunda ngocansi ezikoleni nakubangani ngoba abazali abakhulumi lutho olucacile ngalo nazo. Isithombe: BONGANI MCHUNU
UKUTSHELA izingane ukuthi aziyeke ukwenza ucansi ngaphandle kokuzichazela yikho okwenza ukuthi zigcine zifuna ukuchazelwa abangani.
Lokhu kuvezwe nguNkk Linda Naidoo oyisikhulu senhlangano elwela amalungelo ezingane iChidline KwaZulu-Natal. Ubephawula kulandela ukuphuma kwemibiko yocwaningo lwenhlangano i-International Planned Parenthood Federation oveze ukuthi izingane zifunda ngocansi kubangani nasezinkundleni zokuxhumana.
“Abazali kumele bayeke ukutshela izingane ukuthi zingenzi ucansi ngaphandle kokuchaza ukuthi kungani. Abanye babo bavele bakhuze ibhadi uma ingane imbuza, athi akumele kukhulunywe kunokuthi achaze ukuthi lunesikhathi salo,” kusho uNkk Naidoo.
Uthe izingane zigcina zibuka izinto ezithile kuthelevishini bese zifundisa ezinye ezikoleni.
Ucwaningo obelubheke amazwe ase-Afrika okubalwa kuwo elakuleli, iZimbabwe, Namibia neNigeria luthi izingane zifunda kubantu.
Esinye sezikhulu zenhlangano i-Ippf uMnuz Tewodros Melesse, uthe kuyinkinga enkulu ukungakhulumi kwabazali nezingane zabo ngocansi.
“Izingane ezisafunda zidinga ukuthola ulwazi ngocansi kubantu abahloniphekile nabathembekile ukuze zithole isifundo esiyiso. Sidinga imindeni ukuthi ifundise izingane ngocansi nangendlela eyiyo yokuziphatha,” kusho Melesse.
UNksz Simonia Mashangoane wenhlangano elwela amalungelo abantu abaphila nengculazi, i-Treatment Action Campaign uthe kubalulekile ukuthi abazali bakhulume nezingane zabo ukuze kuliwe nokwanda kwengculazi.
Uthe inhlangano yabo ikhuthaza ukuthi izinhlelo zokufundisa ngocansi ezikoleni kubalulekile ukuthi zingabashiyi ngaphandle abazali.
Lolu cwaningo lwenziwe kubantu abangu-7 662 abaneminyaka ephakathi kuka-16 kuya ku-25 nabantu abaneminyaka engu-25 kuya ku-34. Luveze ukuthi u-38% wentsha beyicela ulwazi kubangani, u-19% ibone kuthelevishini, abangu-18% bebefunda ngalo esikoleni. Bangu-4% kuphela abathe bafunde ngocansi ezikoleni.
Okunye okubalulwe ngabacwaningi nokubathusile ukuthi intsha yakuleli beyinesibalo esikhulu sabaqala ucansi bengaphansi kweminyaka engu-16 uma kuqhathaniswa namanye amazwe.